Guddiga Isku xirka warbaahinta gobolka Bari oo cambaareeyay tacadiyada lagu hayo saxafiyiinta ka howlgala Puntland. – Radio Daljir
Guddiga Isku xirka warbaahinta gobolka Bari oo cambaareeyay tacadiyada lagu hayo saxafiyiinta ka howlgala Puntland.
Maarso 6, 2012 12:00 b 0
Bosaso,Mar 6 -Guddiga isku xirka warbaahinta gobolka Bari ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso ayaa waxaa ay kasoo saarayn bayaan ay ku cambaareeynayaan tacadiyo kale duwan oo loo gaystay qaar ka mid ah warbaahinta iyo wariyeyaasha madaxa banaan ee ka howlgala Puntland.
Bayaanka ayaa waxaa uu u qornaa sidaan.
Maantoo ay taariikhdu tahay 06-03-2012 Maalin Talaado ah waxaa ay saxaafadda Gobolka Bari ay soo gabgabeeyeen Kulamo taxane ahaa oo ay ka wada tashanayeen Dhacdooyin la xiriiray saxaafadda oo qaarkood saameyn ku yeeshay Hanaanka shaqo ee saxaafadda Gobolka Bari, waxeyna gebgebadii Kulankoodii ka soo saareen Qodobo Muhiim ah Oo Isugu Jira soo gudbinta Go?aano ay Saxaafaddu ka gaartay Dhacdooyinkaasi Tacadiga ah iyo Baaq ku aadan Dawladda Puntland.
1-Gudiga saxaafadda Gobolka Bari waxaa uu Si weyn u canbaareynayaa Habki ay ciidamada Dawladda u abaareen Xiritaanka Idaacadda Codka Nabadda iyo Qaadashada Qalab fara badan oo ay idaacadu lahayd.
2- wuxuu gudiga Codsanayaa in la siidaayo Agaasimaha Idaacadda Codka Nabadda Cawke Cabdulaahi Cali oo maalinkii afraad ku xiran Saldhiga Bartamaha Boosaso sidaa awged gudiga waxaa uu Codsanayaa in Wariyaha la soo taago Maxkamad ama la sii daayo maadaama uusan sharcigu qabin in la iska hayo qof asagoon cadaalada la horgeyn.
3-Waxaan usoo jeedinaynaa maamulka in sida ugu dhaqsiyaha badan oo aan sharuud lagu xirin qalabka idacaadda ka maqan dib loogu soo celiyo Kaasoo ku cad warqad gaar ah oo horey loo gudbiyay iyo in dib loo fasaxo \_Maqalka iyo Howlaha Idaacadda.
4-sidoo kale waxaan cambaareynaynaa falal Tacadi ah oo ay Shaqsiyaad dawladda ka mid ah kula kacayaan Saxafiyiinta Bulshada u shaqaynaya kuwaasoo doonayo in ay Naceyb ka dhex beeraan Dawladda iyo Saxaafadda Gobolka ama leh Dano gaar ah.
5-Ka dib markii ay soo kordheen si xad-dhaaf ah Waxyeelaynta iyo ku xadgudubka Saxaafadda Gobolka Bari ee Kaga imaanaya dhinaca wasaaradda Amniga waxaa ay warbaahinta Guud ee Gobolka si Mideysan u go?aansadeen in ay hakiyaan Wararka iyo Barnaamijyada Wasaaradda Amniga sida Shirarkooda Jaraa?id.
6-Gudiga U taagan Midnimada saxaafadda Gobolka Bari waxaa uu si guud u cambaareynayaa Weerarda dilalka, Jirdilka iyo handadaadda ee lagu hayo Guud ahaan saxafiyiinta Somaaliyeed Gaar ahaan dilkii u danbeeyay ee Wariye Cali Axmed Cabdi oo logu dilay magaalada Gaalkacyo.
Qodobadaan ayaa waxaa si guud u gaaray Maamaaluda Warbaahinta Gudaha, Wakilada Warbaahinada Kale iyo Saxafiyiinta Madaxa Banaan.
Musharixiinta jamhuuriga ee Mitt Romney iyo Rick Santorum oo madaxa iskula galay gobolka Ohio.
Baahin: Isniin, Mar 05, Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Gen. C/llahi S. Samatar oo ugu baaqay xukuumada Puntland in ay diyaariso doorashooyinka 8-da Janaayo, 2013; Dallada suxufiyiinta Puntland ee MAP oo cambaaraysay caburinta & dilalka suxufiyiinta; Jibuuti oo beenisay in askar ka tirsan ciidankeeda ku sugan Muqdisho la dilay.